Indlela yokuvimbela elula izimpawu phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Naphezu kweqiniso lokuthi ukukhulelwa - iwumbuso yemvelo futhi efiselekayo eziningi, Kwaziwa kahle kamhlophe ukuthi ukuze kulondolozwe ubuhle kunzima kakhulu ngemva kokukhulelwa. Ukuze wenze lokhu, kumele sihlale njalo siqaphele ngokwabo, isimo sabo, ukubeka eziningi umzamo. Alilona konke, yingakho kukhona bezibona ukuthi ukukhulelwa futhi elula izimpawu atehlukaniseki. Nokho, lokho akulona iqiniso. Uma sihlolisisa bawalandele, ekudleni kwabo, ukusebenzisa imali eyengeziwe, bese ingozi okuvela elula izimpawu ancipha kakhulu. Futhi uma bengenayo avele, bayoba ingasaphathwa. Indlela yokuvimbela elula izimpawu phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Kubalulekile ukucabanga ukuthi izandiso ezinjalo. Yelula amamaki - lena yindlela ibizwa ngokuthi ngokuya ngokwesayensi - kungenzeka ujwayelene hhayi kuphela ukhulelwe, kodwa abesifazane nulliparous futhi amadoda noma ngabe okhuluphele. Lokhu umonakalo ezincane isikhumba ezisuka kusukela ngokushesha kwesisindo somzimba wakho at ongaphakeme isikhumba tone. Isikhumba azikwazi ukumelana, futhi kukhona izikhala ukuthi basuke ngokushesha some ezicutshini. Ekuqaleni elula ngema- ukukhanya pink ke fade nasezinzwaneni bese ziba mhlophe. Uma elula izimpawu zimbalwa nezincane ngalesosikhathi they are cishe ezingabonakali. Nokho, ngaphansi kwethonya ultraviolet ezicutshini engakutholi amnyama, okusho ukuthi bayoba kuyabonakala esikhumbeni ezishukiwe.
izimpawu Nweba akunangozi ngokuphelele, kodwa hhayi ngenxa yobuhle kakhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuba nginakekele umbuzo "Indlela yokugwema elula izimpawu?" Kusengaphambili.
Kwesisindo ngesikhathi sokukhulelwa, kanye ukwanda ubukhulu isisu - izinqubo ongenakuvinjelwa futhi zemvelo. Futhi kubaluleke kakhulu ukugwema kuzuba okungazelelwe isisindo, futhi ngenxa yalokho kufanele balandele yokudla. Nokho, ukukhulelwa kanye Ukudla - imiqondo nolimi. Phela, lo mntwana isethi abukhali isisindo kuyalimaza kakhulu ukwedlula abesifazane.
Nokho, ngaphambi nje ukubukela isisindo sabo, ngeshwa, akwanele. Iqiniso ukuthi ukwanda okukhulu kwezincwadi esiswini kungenzeka kubangelwa ukuba ukuhlukumeza yokudla, kanye nezici bokuphila umbungu. Kungase esikhathini esithile eqala ukukhula ngokushesha. Okufanele ukwenze ukuze ugweme elula izimpawu, kulesi simo?
Lokhu kuzokwenza ngqo kuxhomeke endleleni 'azithathe isikhumba kwabesifazane. ithoni kwesikhumba incike umsoco. Kufanele kuqashelwe ukuqinisekisa ukuthi abesifazane ukudla yayinezinto amaprotheni, aqukethe eningi ngamavithamini A no E. Ikakhulukazi E, kukhuthaza ukukhiqizwa kwe collagen, okuyinto unomthwalo kuyaqina kwesikhumba. Vele Udinga ukufaka amafutha yemifino yakho yokudla, ushizi, amantongomane, okusanhlamvu lonke, yenkomo, amaqanda nobhontshisi. Futhi kufanele kube ngokushesha ngangokunokwenzeka ukushintshela ukudla okunjalo, njengoba ekuthuthukiseni isikhumba ithoni - inqubo akuyona ngokuphazima kweso. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba ayiyeke le carbohydrate ngokushesha digestible, okuyinto atholakala amaswidi. Nokho, lokhu kungase kube ngokwanele.
Ngakho kufanele ukubuyela kaningi lo mbuzo, "Indlela yokuvimbela elula izimpawu phakathi nenkathi yokukhulelwa?". Ochwepheshe abaningi, futhi abesifazane abaningi ebeletha belulekwa ukusebenzisa ekhethekile okhilimu for elula izimpawu. Ziyakwazi lapho ngobuningi. Nakani kunengqondo ukuba intengo ukhilimu noma elangeni bese kwengoma. Kufanele zihlanganisa izingxenye ezifana collagen amino acid kanye ngamavithamini A no E. Ngaphezu kwalokho, kahle, uma endaweni cream izandiso izobandakanya ezikhishwe of izitshalo kanye ulwelwe. Kumele sisebenzise ukhilimu phezu kwesifuba, esiswini namathanga. Lapho lona umyalo obaluleke kakhulu ukufeza inqubo njalo, okungenani kanye ngosuku. Futhi-ke, kufanele uqale kusenesikhathi. Kahle kahle, ngoba 3-4 izinyanga, lapho esiswini isiqala nje sikhule.
Enye impendulo yombuzo othi "Indlela yokuvimbela elula izimpawu phakathi nenkathi yokukhulelwa?" - massage. Into esemqoka ukukhumbula ukuthi abesifazane abakhulelwe ungenza massage ukukhanya kakhulu ngamafutha omnqumo. Kahle kahle, ufuna ukunciphisa kuwukuziphulula futhi kumba. Okokuqala ngobumnene kuwukuziphulula esiswini ngezansi bubheke inkaba ke ngendlela efanayo massaged ethangeni nasesifubeni. Kule migqa esifanayo aluka kancane emzimbeni. Qedela inqubo futhi ayiphulule. Lokhu massage futhi kudingeka kwenziwe nsuku zonke.
Sethemba, lesi sihloko sizophendula umbuzo nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi elula izimpawu ngesikhathi sokukhulelwa ngokugcwele.
Fundzisisa amafutha Cream "Nivea Soft": incazelo, ukwakheka
Uyaxebuka, uyaxebuka isikhumba ekhaya
Imfashini ehlobo - ukugoqa neminye
Futha ngokuba ubuso: ukubukwa kanye nokubuyekeza
Ukuhlanzwa ebusweni ngoba induna ekhaya
Amehlo enkulu kunazo zonke emhlabeni ubani boss?
Iphutha Database "I lokuhlunga lihlukile uhlelo": indlela yokulungisa?
Uyini belungiselela US?
Ezindlini e Odessa
"Graf Orlov" - yokudlela uyakufanelekela netikhulu
Uhlelo ugesi - isixhumanisi esingokwemvelo ukuze isebenze kahle izimoto
Ulenga itshe - indawo eyingqayizivele
Cat zohlobo Ukoma American - umngane umkhaya wangempela
Indlela ukubiza Jack futhi kungenzeka